नेपालमा यौनकर्मी महिलाः कुन शहरमा कति रेट ? | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
नेपालमा यौनकर्मी महिलाः कुन शहरमा कति रेट ?
नेपालमा यौनकर्मी महिला कहाँ बढी पाउने गरिन्छ ? उनीहरु कसरि ग्रहाकको सम्पर्कमा आउने गर्छन् ? उनीहरुलाई कसरि भेट्न सकिन्छ ? हेर्नुहोसदिन भनेर खुलेका होटल, रेस्टुरेन्टमा यौनधन्दा फस्टाइरहेको छ। उर्लाबारीसँग नजिकैको पथरी बजारका धेरै विशेषता मिल्छन्। दुवै क्षेत्रका स्थानीयको बदिलँदो जीवनशैली र आयस्तरसँगै सेक्स स्टेसनहरू बनिरहेका छन्। पथरीका होटल, रेस्टुरेन्टमा भुटानी शरणार्थी युवतीहरू धन्दामा थिए, तर उनीहरू तेस्रो मुलुक गएपछि यहाँको सेक्स बजारमा मन्दी आएको स्थानीय बताउँछन्।
यो पनि पढ्नुहोस शेरबहादुर देउवाले भने, 'मलाई प्रधानमन्त्री बन्ने लोभ छैन'
सिरहाको लहान बजारस्थित हस्पिटल चोक अर्को सेक्स स्टेसन हो। यहाँका न्यू राज होटल, ब्लुस्टार, आशिकी होटल एन्ड लजमा धन्दा चल्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। लहानमा पनि प्रहरीले छापा मारेर दर्जनौँलाई पक्राउ गरिसकेको छ। सर्लाहीका मलंगवा, नवलपुर, लालबन्दीलगायत साना बजारमा पनि थुप्रै सेक्स स्टेसन छन्। यहाँ खुलेका रेस्टुरेन्ट तथा लजहरूका अधिकांश ग्राहक गाडी चालक हुन्। स्थानीय व्यापारी र केही बाहिरबाट आउनेहरू पनि हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। जनकपुरको जनकचोकलाई त स्थानीयवासी ‘रेडलाइट एरिया’ भन्ने गर्छन्।उनीहरूका अनुसार यहाँका धेरैजसो लज यौनधन्दाकै लागि खोलिएका छन्।
यो पनि पढ्नुहोस हरेक मृत्युलाई कोरोनासँग नजोडौं: स्वास्थ्य मन्त्रालय
ढल्केबर, लालगढ, बर्दिवास, चन्द्रनिगाहपुर हुँदै पथलैयासम्ममा गाडी चालकहरूलाई खाना, बस्नसँगै यौन सेवा दिने ठाउँ प्रशस्त भेटिन्छन्। त्यसपछि पुगिने हेटौँडालाई त गाडीको लोड बिसाउनेमात्र होइन, यौन तिर्खा मेटाउने शीतल चौतारी भने पनि हुन्छ। हेटौँडामा काठमाडाँैदेखिका यौनकर्मीहरूको समेत जमघट हुन्छ। तीन सयको हाराहारीमा यौनकर्मी रहेको अनुमान गरिएको हेटौँडामा प्रहरी र एनजीओ आईएनजीओले यौनकर्मीको निगरानी गरिरहेका छन्। चितवनलाई पूर्व र पश्चिम सबैतिरको केन्द्रीय सेक्स स्टेसन भने पनि हुन्छ। चितवनका रत्ननगर, नारायणगढदेखि मौवाखोलासम्म साना–ठूला सेक्स स्टेसन सञ्चालित छन्।
इटहरीका डीएसपी विद्यानन्द माझीले गत वर्ष चैतदेखि चलाएको अभियान भदौबाट रोकिएको छ। उनी यौनधन्दा रोकिएकाले अभियान रोकेको दाबी गर्छन्। नारायणगढका एक होटल व्यवसायी भन्छन्, ‘प्रहरीले यौनधन्दा रोक्न होइन, पैसा कमाउन यस्तो अभियान चलाएका हुन्।’ एउटा शहर, एउटा ठाउँमा मात्र होइन, देशैभरि साना, ठूला शहरमा यौन व्यवसायले विकराल रूप लिइसकेको छ। प्रहरीले छापा मारेर केही जोडीलाई पक्राउ गर्दैमा यसमा नियन्त्रण हुँदैन। यौन व्यवसायलाई बेलैमा व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ। यौनव्यवसायीले नै बेलाबेला नेपालमा पनि रेडलाइट एरिया तोकिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। अब यस मागप्रति गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। –
यो पनि पढ्नुहोस बारा जीप दुर्घटनाका घाइते प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मृत्यु, घटना शंकास्पद बन्दै
साभार शुक्रवार साप्ताहिक
११,चैत्र.२०७४,आईतवार १२:०० मा प्रकाशित
← ट्रम्पसँग सम्बन्ध रहेको दाबी गर्ने यी महिला, यस्तोसम्म भएछ
टिपर दुर्घटनामा एकको मृत्यु, एक गम्भीर घाइते – पाँचथर →